China Ewepụghị haịdrọlik ọnwụ igwe rụpụta na Factory | Kangpa
1. Ọrụ ahụ dị mfe ma na-azọpụta ndị ọrụ, ọnụọgụ ọdịda dị ala, ike mbelata siri ike, na nbibi ngwa ngwa ngwa ngwa, karịa 1000 ugboro kwa awa.
Igwe mkpụmkpụ hydraulic dị larịị dị mfe ma na-arụ ọrụ ngwa ngwa, nke bụ iji gbanwee adịghị ike nke igwe ihe eji arụ ọrụ.
Ọganihu n'ihu iji melite arụmọrụ mmepụta na ụlọ ọrụ ahụ. Igwe a dị mma maka plastik, akpụkpọ anụ, ụfụfụ, naịlọn, akwa, akwụkwọ.
Kpụzi na ịcha otu ma ọ bụ karịa ọkwa nke mbadamba na ihe dị iche iche dị iche iche a na-eji eme ihe na akpụkpọ anụ, ịkpụ akpụkpọ ụkwụ, Uwe, akpa akpụkpọ anụ, ihe egwuregwu, plastik, nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ ụgbọala, wdg.
Ugboro abụọ na mmanụ cylinder, okpukpu abụọ na-ejikọta mkpanaka nkenke ụzọ anọ na-arụ ọrụ, na-egbutu omimi + -0.1mm maka ọnọdụ ọ bụla.
Akụkụ njikọ niile nke igwe a na-arụ ọrụ iji mmanụ mmanụ akpaka. Enweghị nchekasị banyere mmebi nke akụkụ igwe nke kpatara mmanụ mmanụ na-arụ, nke mere na ejiji ahụ belatara na ọkwa dị ala, na ọnwụ na-egbu ọnwụ na mbepụ nke igwe ka mma.
Mgbe egbutu isi ahụ, ọ ga-akwụsịlata tupu ya emetụ onye na-egbu ihe 10mm aka, wee tinye nrụgide abụọ ahụ. Mgbe a na-eme ka efere elu na-arụ ọrụ na onye na-egbutu ihe, ọ ga-agbanwe ma belata ya ka ọ ghara inwe njehie akụkụ dị n'etiti etiti elu na nke ala mgbe ị na-egbutu ihe multilayer.
Ọdịdị nhazi pụrụ iche, yana ngwaọrụ nchedo dị mma, ngbanwe mgbanwe nke ịcha ogologo na ike ịcha, nwere ike ime ka ndụ ọrụ nke onye na-anwụ anwụ na iwepụ ya belata. Ọdịdị nhazi pụrụ iche iji kwekọọ na ịcha mma na ịcha elu. Mee ka mgbanwe strok dị mfe ma zie ezie.
Ejikọtara usoro hydraulic dị na Taiwan na ngwa eletriki ndị Japan, nke na-echekwa ọkụ eletrik, nwere obere mkpọtụ, arụmọrụ dị mfe, ma na-eme ka arụmọrụ dị elu.
Igwe ọkụ electrostatic na-ekpo ọkụ nke dị elu nke igwe anaghị eji akwụkwọ eji aka eme ihe.
Osote: Ogwe mgbasawanye ikuku
Pur Hot gbazee gluu Nonwoven Laminating Machine, Hot gbazee mama mama Laminating Machine N'ihi Uwe, Pur Hot gbazee nrapado Laminating Machine, Hot gbazee mama mama Laminating Machine na Ce Asambodo, Hot gbazee gluu Ngwa, Automatic Hot gbazee mama mama Laminating Machine,